မနက်ဖြန် အိုင်စီတီမှာ 10.10 အထူး ပရိုမိုးရှင်း ရှိတာ သိပြီးကြပြီလား?? ~ The ICT.com.mm Blog
မနက်ဖြန် အိုင်စီတီမှာ 10.10 အထူး ပရိုမိုးရှင်း ရှိတာ သိပြီးကြပြီလား??
Earn Double Points Day မှာ အထူးရွေးချယ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး Quality Branded ပစ္စည်းတွေကို အထူး Special Offer ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
ဒါ့အပြင် Members တွေအတွက် 10.10.2021 ကနေစပြီး သုံးရက်အတွင်း ဈေးဝယ်ခဲ့ရင် နောက်တစ်ကြိမ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာ Discount အဖြစ်သုံးလို့ရတဲ့ Reward Points တွေကိုလည်း နှစ်ဆတောင် ပေးဦးမှာနော်။
Points နှစ်ဆရချင်တဲ့ Members မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း အခုကတည်းက အကောင့်ကြိုတင်ဖွင့်ထားလို့ ရပါတယ်နော်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်မဲ့ အသုံးတည့်ပစ္စည်းတွေကိုပဲ ရောင်းချပေးတာမို့ လက်ဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။
အိမ်တိုင်ယာရောက်ပို့ဆောင်ပေးတာ‌ေကြာင့် လူကြီးမိဘတွေကို လက်ဆောင် ကန်တော့ချင်သူတွေအတွက်လည်း အိမ်ပြင်ထွက်စရာမလိုဘဲ ဂါရဝပြုနိုင်မှာဖြစ်လို့ အားလုံးအတွက် အရမ်းကိုအဆင်ပြေတဲ့ အိုင်စီတီရဲ့ 10.10 Double Points Earning Super Sale အကြောင်း ကြိုတင်သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်နော်။
» အိုင်စီတီမှာ ပစ္စည်းတိုင်းအတွက် အပိုထပ်ဆောင်း % ပေးစရာမလိုဘဲ ဘဏ်စနစ်နဲ့ ပေးချေနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။ #KBZPay, #WavePay, #CBPay, #Direct bank transfers to #KBZ, #AYA and #CB တို့ကို လက်ခံပါသည်။
#ShopICT #Myanmar #Orderonlinenow #doublepointsday #1010supersale #ICT #Octoberpromotion #QualiryBrandsonDiscount
Newer 60% အထိတောင် ဈေးလျှော့ပေးထားတဲ့ UGREEN’s Clearance Sale !!!
Older iPhone 13 and 13 mini တို့လဲ အိုင်စီတီမှာ ဝယ်လို့ရပါပြီ